maungone November 19, 2012 - 12:26 am ok
Reply thein min han November 19, 2012 - 6:37 am just for american economy or just for ur family ? mr obama … u already knows that burma is rich in natural resources ..
Reply robert November 19, 2012 - 2:04 pm တပ်လည်းတပ်နိုင်ကြတယ်နော် တစ်ချိန်ကနယ်ချဲ့အားကိုးပစိန်ရိုးဆို ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်သူကိုဘုံရန်သူဆို အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုလက်ဝယ်ကိုင်သူကိုအရေးယူမယ်ဆို သူများခငိးတဲ့လမ်းအဆင်သင့်ဝင်ရှောက်တဲ့ ကြွက်ပျင်းတွေ
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 20, 2012 - 3:51 am ကြွက်ပျင်းက တော်သေးတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ လမ်းလျှောက်သေးတယ်။ အခုဟာက ရေကန်အသင့် ကြာအသင့် အဆင်သင့် ခူးခတ်ပြီး ၀င်စားရုံ လုပ်ချင်နေကြတာ။ အားလုံး စရိတ်ငြိမ်း လာကူစေချင်တာ။ ဘယ်သူက အလကား ပေးမလဲ။ ဘာမှ အလကား မရဘူးဆိုတဲ့ သီချင်းလိုပေါ့။ တခု ရှိတာက တရုတ်ယူနေတာကို အမေရိကန် လာယူမယ်။ တရုတ်ထက် သာတာက အမေရိကန်က လူ့အခွင့်အရေး၊ ဘာညာကွိကွတွေ အလေးပေးရတော့ မတရား မလုပ်ရဲ၊ လုပ်လို့ မရဘူး။ ယူတာတော့ ယူမှာပဲ။ ပေးရမှာပဲ။ ရစရာ မရှိရင် လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ၂ဦး၂ဘက် အကျိုးရှိလို့ လာတာပါ။ ဒါပေမယ့် တရုတ်လို မတရားယူ၊ စစ်ဗိုလ်တွေလက်ထဲ ထည့်သွားတာထက် စာရင်၊ သင့်တော်တာ ပြန်ပေးမယ်၊ ပြည်သူတွေ ခံစားခွင့်ရှိမယ်။ ဒါ အမြတ်ပါပဲ။
Reply swe htwe November 20, 2012 - 12:20 am We need help from America. But we must struggle by ourselves. Good luck Mr Obama.
Reply KYAWKYAWLWIN December 4, 2012 - 6:53 pmွှီအိုဘားမားလာတာအရေးအကြီးဆုံးက သူ ဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်ရင် မမှားချင်ဘူး